Maitiro ekugonesa Sudo paDebian Stretch | Linux Vakapindwa muropa
Ini nguva pfupi yadarika ndaifanirwa kuchinja kugoverwa kwedesktop komputa yangu kubva kuBuntu kuenda kuna mai distro, Debian. Kunyangwe vazhinji vedu tichiti zvese kugoverwa zvakada kufanana, ichokwadi kuti pane zvidiki diki zvinoita kuti kugoverwa kwese kuve kwakasiyana uye kunyangwe vamwe vashandisi vane matambudziko, sezvakaitika kwandiri.
Rimwe rematambudziko makuru andakamhanyira mariri nderekuti Debian haishande zvakafanana neUbuntu nehurongwa hwekuda, zvirinani kune vasiri-midzi vashandisi.
Sudo ndiwo murairo unoshandiswa kumhanya mirairo seye superuser. Izvi zvinodikanwa kuti uite mabasa akadai sekuisa mapakeji, kugadzirisa, kurekodha shanduko kune mamwe mafaera, nezvimwe. Chimwe chinhu chakakosha uye icho muDebian hatigone kuzviita seUbuntu asi nekupinda semudzi mushandisi kana system maneja.
Mushure mekumisikidzwa kwakajairwa kweDebian 9, Kutambanudza kune Sudo yakaiswa nekumisikidza, asi haina kufunga mushandisi wedu semushandisi anokwanisa kuishandisa, dambudziko diki rine mhinduro, yakapusa uye inokurumidza mhinduro kune chero mushandisi.
Kutanga isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye nekuita rairo "su". Kana tangova sevatariri vehurongwa tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Izvi zvichatiratidza faira rekumisikidza yemirairo yeSudo. Zvino isu tinofanirwa kuwedzera inotevera tambo:
Uye isu tinofanirwa kuwedzera inotevera tambo pasi pemudzi:
Iye zvino tinofanirwa kusevha zvese zvirimo nekudzvanya Control + O uye tobva tabuda nekutsikirira Control + X. Izvi Shanduko inogona zvakare kuitwa nechirongwa cheGeditKuti tiite izvi, isu tinoshandura iyo "nano" rairo kune iyo "gedit" raira mushure mekushandisa midzi. Mushure meizvi, tinotangazve zvigadzirwa kuti zvigadziriswe zvishandiswe uye voilaIsu tatova nemutemo weSudo wakagadzirira kushandisa sekunge isu taive neUbuntu pakombuta yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekugonesa Sudo paDebian Stretch
Wakaedza izvi here?
Uye wozotangazve chikamu.
Ini handina kushandisa debian kwenguva yakareba, zuva rega rega ndinonzwa kusununguka muCentos asi zvinoenderana nevakuru vedhodhi dhodhi zvakaringana kukuwedzera iwe kune iro boka reboka:
(Kunyangwe ndichifunga kuti ndinorangarira kuti raimbova boka remavhiri)
Mubvunzo, iyo faira yaunoti inoshandura mune yangu haina chinhu uye haina kana chinhu chakambonyorwa, mune iyo debian kuisirwa ini handina kusarudza sarudzo yekushandisa Sudo (mune inoisa mifananidzo). Pane chinoitika here kana ndikanyora zvese zviri mufaira izvo zvisina chinhu / zvingave zvichisika?
1- bvunzo yekuisa Sudo ne # (rombo)
nano / etc / sudoers
2.- Edza zvakare kugadzirisa iyo faira ne # (rombo)
Ndinovimba zvinoshanda kwauri.
Pindura kuna AntonioVieyra